मार्च १th का राशिफल भनेको के हो? - राशिफल
मार्च १th का राशिफल भनेको के हो?
म तपाईंलाई रहन र पूरै लेख हेर्न आमन्त्रित गर्दछु किनकि म तपाईंलाई आजको राशिफल दिनेछु र स्वास्थ्य, पैसा र प्रेममा सम्बन्धित सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्षहरू। म तपाईंलाई च्यानल सदस्यता लिन र सूचना घण्टी सक्रिय गर्न आमन्त्रित गर्दछ ताकि प्रत्येक दिन तपाइँलाई तपाइँको चिन्हसँग सम्बन्धित सबै कुरा थाहा हुनेछ र तपाइँ धेरै परिस्थितिहरूबाट बच्न सक्नुहुन्छ र अप्रत्याशित जुडाहरूसँग कसरी व्यवहार गर्ने जान्न सक्नुहुन्छ शनिवार, मार्च १th, २०२१ अर्को बिहान। प्रेममा एक सप्ताहन्त जुन रमाईलो र हास्यास्पद हुनेछ तपाईंको शासक बुधवार आज शनिबार युरेनसबाट degrees० डिग्री मा एक विशाल सेक्सटाइल ग्रहको पक्ष हो जुन एक रोमाञ्चक, हास्यास्पद सप्ताहन्तको प्रतिज्ञा गर्दछ तर त्यहाँ चन्द्रमाको एउटा वर्ग पनि छ जुन यो degree ० डिग्री पक्ष हो त्यो धेरै अस्थिर छ, त्यसैले तर्क र उजूरीबाट टाढा रहनुहोस् जुन तपाईंको प्रेम जीवनमा राम्रो कुराको नतिजा गर्दैन, यदि तपाईं असुरक्षित महसुस गर्नुहुन्छ भने, स्पष्टसँग बोल्नुहोस् र सामाजिक सचेतनाको साथ आफ्नो चिन्ता व्यक्त गर्नुहोस् झगडा वा गलतफहमीबाट जोगिनुहोस् जबकि त्यो degree ० डिग्री पक्ष जारी रहनेछ, जुन हुनेछ अस्थायी र चाँडै स्थिर हुनेछ एन।
बरु, यो एक चेतावनीको रूपमा लिनुहोस् तपाइँले के गरिरहनु भएको छ अत्यधिक नहोस्। अब हामी स्वास्थ्य पैसा र प्रेम को पक्षहरु मा बदलिन्छ। तर पहिले म तपाईंलाई सूचना बेलको सदस्यता लिन र सक्रिय गर्न आमन्त्रित गर्न चाहान्छु ताकि प्रत्येक दिन तपाईलाई आफ्नो चिह्नसँग के गर्ने सबै कुरा थाहा हुन्छ र जसले गर्दा तपाई धेरै परिस्थितिहरूबाट जोगिन सक्नुहुन्छ र युरेनस र शुक्र बीचको संयोजनको साथ अनजानो मोहसंग डिल गर्नुहोस् भने तपाईं आफ्नो शासक, बुध मा काम, तपाईं एक भावनात्मक दुविधा वा एक चौराहेमा मा पाउनुहुनेछ।
तपाईंले भर्खरै भेट्नु भएको कोही ईमानदार देखिन्छ। कम्तिमा अहिलेको लागि, शंकाको लाभ दिनुहोस् जब सम्म तपाईलाई थप थाहा हुँदैन, तर सम्भावित जोडीमा ढोका बन्द नगर्नुहोस्। आजको शनिवारलाई उत्तम सम्बन्धको पूर्वानुमान गर्दै यस शनिबार, तपाई यस शनिबार धेरै राम्रो हुनुहुने छ यदि तपाईको पार्टनरले पनि मिथुन जस्तो मिथुन र तुला नै सबैभन्दा रिसाएको सम्बन्ध हो भने तपाई आफ्नो साथी वा साथीको साथ झगडा वा गलतफहमीको सिकार हुनुहुन्छ। चिन्ह वृश्चिक मीन र वृषभ कन्या र मकर तपाईंको वर्तमान अनुकूलता तपाईं लुफ्टेमिनी मिश्रा र कुम्भका अन्य तत्त्वहरूका साथसाथै धनु र लियोका अन्य तत्वहरूसँग सामञ्जस्यपूर्ण स्वरमा हुनुहुन्छ, यदि तपाईं अविवाहित हुनुहुन्छ भने मार्चको यो दोस्रो चरण, जुन हो पहिले नै ढोकामा र तपाईंलाई विषुववृत्तिको लागि नेतृत्व गर्दछ, प्रेम र रोमान्सको स्वरको साथ छ, स्वास्थ्यमा, तपाईं यस अन्तिम एक दिनको अवधिमा धेरै बेचैन हुनुहुन्थ्यो र नतिजाको रूपमा, आज तपाईंलाई डरको स्वरले घेर्यो।
तपाईले गर्न सक्ने उत्तम कार्य भनेको प्रत्येक दिनको लागि दिनदिनै प्रत्येक दिन लिनु हो जुन अरूलाई डराउँदैन वा काममा तपाईलाई कष्ट नदिई बाहिर आउँछ कामको पक्षमा यस हप्ताको ग्रह स्थिति धेरै आशाजनक र फलदायी छ चाँडै टाउको दुखाइ हुनेछ एक अन्तिम सबै चीजहरू निश्चित हुनेछ जब पछिल्लो केही दिनमा तपाईंको रिजेन्टको गिर्दो ट्रान्जिटको परिणाम स्वरूप, जुन १० सम्म चलेको थियो जुन तपाईंलाई पैसा र भाग्यमा तपाईंको कामको लागि कठिनाइहरू थियो। यस शनिबार रमाइलो गर्ने योजना बनाउनुहोस् जबकि समान समयमा शासक पारा ब्रह्माण्डको गतिमा पैसा बनाउँदै हुनुहुन्छ कि तपाईंलाई आजको खतरनाक प्रवृत्तिले घेरेको प्रेरणालाई मिथ्या बनाउनु पर्छ तपाईंको मिथुन चिन्हमा अरूलाई र आफैलाई धेरै सोध्न तपाईं थकित हुनुभए सम्म मैले के गर्नुपर्छ तपाईको शब्दको लम्बाइलाई ध्यान दिएर बोल्नबाट जोगिनुहोस् वाक्यांश दिनको दिन यदि तपाई सकारात्मक दृष्टिकोण राख्न चाहानुहुन्छ भने सँधै सकारात्मक व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क राख्नुहोस् र आजको रंग रंग सेतो छ र आजको लागि भाग्यशाली संख्या १ 13 42२ and२ र २ are हो र त्यो तपाईको हो आजका लागि कुंडली म तपाईंलाई आमन्त्रित गर्दछु मलाई एक मनपराउँनुहोस् र च्यानलको सदस्यता लिनुहोस् र सूचना घण्टी सक्रिय गर्नुहोस् ताकि तपाईं आफ्नो पूर्ण नि: शुल्क दैनिक राशिफल कहिल्यै नभुल्नुहुनेछ। म तपाईलाई राम्रो दिन चाहन्छु र चाँडै भेट्छु
मार्च १ 13 को एक csp छ?
एक मीनको रूपमा जन्ममार्च १th, तपाईंको तीव्रता, प्रयोग र आध्यात्मिकता तपाईं परिभाषित। तपाईं आफ्नो जीवनमा ठूलो जोश ल्याउनुहुन्छ र कुनै कुराको लागि समय र उर्जा खर्च गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ जुन तपाईंलाई सार्थक लाग्छ। तपाईंसँग रूचिहरूको बढ्दो संख्या छ, तपाईं कम्तिमा पनि एकचोटि प्रयास गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ।
तथ्य पद तपाईको जन्म महिनाले प्रकट गर्ने कुराहरु प्रस्तुत गर्दछ जनवरी मा जन्मेका बच्चाहरु हठी र कट्टरपन्थी मानिन्छ जब उनीहरू बढ्दै जान्छन् महत्वाकांक्षी हुन जान्छन् जनवरीमा जन्मे तिमी मानिस हौ र तपाई मान्छे अवलोकन गर्ने र अध्ययन गर्ने बाटोको रूपमा अरूको बारेमा र आफैंको बारेमा जान्नुहोस् बच्चा बच्चाहरूलाई पनि अरूलाई सिकाउने र मद्दत गर्ने प्रबल इच्छा हुन्छ। फेब्रुअरी, यदि तपाइँ फेब्रुअरीमा जन्मनुभएको थियो भने, तिनीहरू फेब्रुअरीमा धेरै कलात्मक र रचनात्मक हुन सक्छन् - बच्चाहरू पनि धेरै स्मार्टका साथ फेब्रुअरीमा जन्मेका मानिसहरू स्वतन्त्र विचारकहरू हुने सम्भावना बढी हुन्छन् र कहिलेकाँही विद्रोही हुन्। राम्रो कुरा के हो भने तिनीहरू वास्तवमै उनीहरूसँग सम्पर्कमा थिए। व्यक्तित्व र उनीहरू के चाहन्छन् जान्नुहोस् फेब्रुअरी बच्चाहरू कहिलेकाँही आक्रामक हुन सक्छन, तर उनीहरूसँग पनि एउटा संवेदनशील पक्ष छ जुन मानिसहरूले वास्तवमै प्रशंसा गर्छन् मार्चमा जन्मेका मानिसहरू भन्दा धेरै तपस्वी नै हुन्छ जब तपाईं जन्मँदा मार्चमा जन्मनुभयो तपाईं सामान्यतया आफ्नो वास्तविक व्यक्तित्व राख्नुहुन्छ तपाईलाई कसैलाई राम्रोसँग थाहा नभएसम्म लुकाउने शिशुहरू प्रायः सबैका लागि राम्रा हुन्छन् र तिनीहरू सबैले सँगै बस्न चाहान्छन् किजले भने सद्भाव धेरै महत्वपूर्ण छ मार्चका बच्चाहरूको लागि मार्चमा जन्मेका मान्छेहरू धेरै विश्वासयोग्य हुन्छन् जबसम्म यो विश्वास भंग हुँदैन तबसम्म सबै शर्तहरू हुन्छन्। अप्रिलमा अप्रिलमा बच्चाहरू प्राय: कडा र खेलकुद हुन्छन्, तिनीहरू जहिले पनि उनीहरूको वरिपरि देखिन्छन् जो अप्रिलमा हुन्छन् उनीहरू जन्ममा मायालु ध्यान दिन्छन् र उनीहरू उत्साहित खोजीहरू हुन्छन् यसको एउटा कारण ey सँधै हतारमा हुन्छन् किनकि उनीहरू आफ्नो अर्को एड्रेनालाईन भीडको खोजी गर्दैछन् अप्रिल शिशुहरू प्रायः कुनै पलंग आलु हुँदैनन् यदि तपाई अप्रिलमा जन्मनुभएको थियो भने तपाईको जीवनमा धेरै कार्य र कार्य साहसिक सम्भावना हुन सक्छ धेरै मेमा जन्मेका धेरै व्यक्ति हुन सक्छन आकर्षक, उनीहरूको बायाँ मस्तिष्कको मस्तिष्कको दायाँ जी भन्दा आधा भन्दा बढी प्रयोग गरेर, जसको मतलब हो कि तपाईं संख्या र तथ्यहरू भन्दा बढी तार्किक हुनुहुन्छ खुसी हुन तपाईंको खुसीको सपना छ र तपाईंको भविष्यको लागि पनि यदि तपाईं मेमा जन्मनुभएको थियो। तपाईं दिन मा तर्क प्रयोग र रातमा ठूलो सपना। जुन जूनका बच्चाहरू धेरै संवेदनशील हुन्छन् जुन जूनमा जन्मेको कसैलाई दु: ख दिन धेरै लिदैन तर उनीहरूले तपाईंलाई थाहा दिदैनन् किनकि उनीहरू अत्यन्तै शिष्ट जूनका बच्चाहरू नरम-बोलीका हुन्छन्, तर उनीहरूका कारण शान्त व्यक्ति प्रायः उनीहरूको कुरा सुन्छन्। र उनीहरूको सल्लाह गम्भीरतासाथ लिन्छन्।
यदि तपाईं जूनको बच्चा हुनुहुन्छ भने तपाईं अरू व्यक्तिलाई खुशी पार्न चाहानुहुन्छ जब तपाईं अर्को व्यक्तिको समान चीज चाहानुहुन्छ, यदि तपाईं अरूको पक्षमा खडा हुनसक्नुहुन्छ भने, यदि तपाईं जुलाईको अवसरमा जन्मनुभयो भने तपाईं पूर्ण ऊर्जा मान्छे पाउँदै हुनुहुन्छ भने झुण्ड्याउन रमाईलो छ। तपाइँका साथीहरूसँग बाहिर जानुहोस्, तपाइँको ज्वलन्त व्यक्तित्व हेर्नुहोस् र तिनीहरूलाई तपाइँसँगै बस्नुहोस्, आफैंलाई केहि भन्नुहोस्, प्रफुल्लित वापसीको साथ फिर्ता आउन केवल यसले एक सेकेन्ड लिन्छ यदि तपाइँ अगस्तमा जन्मनुभएको थियो भने तपाई सम्भवतः जन्मजात कार्यकारी अगस्त बच्चाहरू हुनुहुन्छ। यी नेतृत्व कौशल प्रयोग गर्नुहोस् दुबै व्यवसाय र व्यक्तिगत जीवनमा फस्टाउन सेप्टेम्बर सेप्टेम्बर शिशुहरू धेरै विवरण-उन्मुख छन् यदि तपाई सेप्टेम्बरमा जन्मनुभयो भने तपाईं सम्भवतः सिद्धतावादी हुनुहुन्छ, तपाईसँग जहिले पनि सबै कुरा पूर्ण हुनु आवश्यक छ, र तपाईले अपेक्षा गर्नुभए अनुसार सेप्टेम्बरका बच्चाहरू धेरै उच्च हुन्छन्। व्यवसायको जीवनको साथसाथै तपाईको निजी जीवनको संगठन र विवरणहरूको व्यक्तिको अपेक्षा र यदि कोही छोटो भयो भने सेप्टेम्बरले धेरै चाँडै आलोचना गर्नेछ अक्टुबर अक्टुबरका बच्चाहरू धेरै हल्का र लापरवाह हुन्छन्, तिनीहरू अत्यन्त स्वतन्त्र छन्, यदि तपाइँ सेप्टेम्बरमा जन्मनुभएको थियो भने तपाइँ प्राय: उज्ज्वल पक्षमा हेर्नुहुन्छ जब तपाइँ उज्ज्वल पक्ष देख्नुहुन्छ, पेजले तुरुन्तै देख्न सक्दैन, तब एउटाले खोजी गर्न पर्छ। अक्टुबरमा जन्मेका धेरै व्यक्तिहरू जहाँसुकै गए पनि उनीहरू रमाइलो र रमाईलो छन् किनभने अक्टुबरका बच्चाहरू रमाइलो र कुराकानी गर्ने बनाउँदछन् ताकि उनीहरूले नोभेम्बरमा साथी बनाउँदछन्, यदि तपाईं नोभेम्बरमा जन्मेका चीजहरू तपाईंको जन्म महिनाले तपाईंको बारेमा बताउँदछ नवम्बर बच्चाहरू सामान्यतया धेरै जिद्दी र धेरै गोप्य हुन्छन्, जब नोभेम्बरको बच्चा साँच्चिकै केन्द्रित हुन्छ, खराब सम्भावनाको सम्भाव्यता यदि तपाई नोभेम्बरमा जन्मेका हुनुहुन्छ भने तपाई धेरै चतुर र आत्म-प्रेरित नवम्बर शिशुहरु कहिलेकाँही कसैको सहयोग लिन चाहनुहुन्न, यदि कोहीले पनि बग एक यदि तपाई नोभेम्बरमा जन्मेको हो भने तपाई बढ्न सक्नुहुन्छ, तर तपाई डिसेम्बर बच्चाहरु मात्र हुन चाहानुहुन्छ भने रमाईलो हुन्छन् र उनीहरु ध्यान केन्द्रित हुन मन पराउँछन् जब उनीहरु मानिसहरुको कोठामा हुन्छन् सबै ध्यान उनीहरुमा हुनुपर्छ। यदि तपाईं डिसेम्बरमा जन्मनुभएको थियो भने तपाईं सायद घरमै धेरै सक्रियतासाथ बस्नुहुन्छ र टिभी हेर्नुहुन्छ जुन तपाईंको कुरा होइन चिया डिसेम्बरका बच्चाहरू आफैमा गर्व गर्छन् र तपाईं केही पनि रोक्नुहुन्छ भने म तपाईंलाई पछाडि राख्न चाहन्न। तपाइँ, तपाइँलाई पछाडि लड्न कुनै समस्या छैन त्यसैले हामीले महीना डेसक कसरी ग ?्यौं? रिबे हामीलाई तल टिप्पणी सेक्सनमा जानकारी दिनुहोस् र तपाईं अधिकको लागि सदस्यता लिनुहोस्
तपाईंको ज्योतिषीय चार्टCusp
मार्च १व्यक्ति मीन-मेषमा छन्Cusp। यो छCuspपुनर्जन्म को। यसमा जन्मेका मानिसहरूcspकडा परिश्रम गरिरहेका छन्।
के तपाईंले कहिल्यै कसैलाई भेट्नुभयो जसलाई लाग्यो कि तपाईंले तुला राशि हो जस्तो लाग्थ्यो जब तपाईं वास्तवमा वृषभ हुनुहुन्छ? ठिक छ, तपाईंको गल्ती साइन इनको लागि ती गलत गरिएको हुनुपर्छ। तपाईंको बढ्दो चिन्हले तपाईंको व्यक्तित्वमा प्राय: महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ।
यो छविले संसारले तपाईलाई देख्दछ र उनीहरूको प्रभाव सबैको हुन्छ जब तपाई तिनीहरूलाई भेट्नुहुन्छ। त्यसोभए यसले कसरी काम गर्दछ? आउनुहोस् पत्ता लगाउनुहोस् ...
एकछिन पर्ख! त्यो भन्दा पहिले, सदस्यता लिन क्लिक गर्नुहोस् र सूचना घण्टी बजाउन नबिर्सनुहोस् अधिक गुणस्तर सामग्रीको साथ अद्यावधिक रहन। ओह, र पशुलाई समर्थन गर्न अन्त सम्म यो लेख हेर्नुहोस्। प्रभावको बारेमा अधिक जान्नको लागि तपाईंको व्यक्तित्वमा तपाईंको आरोहण चिन्ह पत्ता लगाउन, हामीले सर्वप्रथम एउटा आरोहण चिह्न के हो भनेर बुझ्नु पर्छ।
एक बढ्दो संकेत राशि चक्र हो जुन पूर्वबाट तपाईंको जन्मको समयमा उदायो। यसलाई चढाईको रूपमा पनि चिनिन्छ र चन्द्रमा वा सूर्य जत्तिकै तपाईंको कुंडलीको अंश हो आरोही भित्र छ, ओट तिनीहरूकोमा फरक फरक हुनेछ। इम्प्रेशनको कुरा गर्दै, एक सूचीको साथ सूची सुरु गरौं ..
मेष आरोही पहिलो प्रभाव: गतिशील, अग्रगामी, सकारात्मक र एक जन्मने नेता, यी ती विचारहरू हुन् जुन कुनै व्यक्तिको टाउको भित्र जान्छ जब उनीहरूले तपाईंलाई पहिलो पटक भेट्छन् शान्त वृश्चिक, लजालु कन्या, वा लजालु मीन, तर जब तपाईंको मेष तपाईंको उदाउँदो चिन्हको रूपमा छ, तब उनको तपाईंको पहिलो प्रभाव बढि बहादुर मेष जस्तो हुनेछ। केही व्यक्तिहरूले तपाईंलाई थोरै जबरजस्ती वा डरलाग्दो फेला पार्न सक्दछन्, तर तिनीहरूलाई पछि राम्ररी चिने पछि यो हट्नेछ। हामी भन्न सक्दैनौं कि यदि तपाईंको सूर्य र चन्द्रमा पनि तपाईंको चक्रव्युहको समान राशि चिन्हमा छन् भने, त्यसोभए तपाईं अरूको सामु देखा पर्ने व्यक्ति हुन सक्नुहुन्छ।
वृषभ आरोहण पहिलो प्रभाव: भव्य यदि तपाईको आरोही प्रेमको देवीको शासन हो कि एक चिन्ह हो भने राम्रो देखिने आशा गरिन्छ। जब व्यक्तिहरू तपाईलाई पहिलो पटक भेट्दछन् उनीहरूले तपाईंलाई सुन्दर र आकर्षक पाउनेछन्। केहि पूरै प्याकेजको रूपमा तपाईंलाई देख्न सक्छ।
एन ठीक छ, तपाइँ सायद सोच्नुहुन्छ कि यो साँच्चिकै राम्रो छ एक वृषभ आरोही हुनु हो। त्यो पूर्ण रूपमा सही छैन। कुनै पनि अन्य आरोहित राशि चिन्ह जस्तै, यसलाई पनि यसको समस्याहरू छन्।
उदाहरण को लागी, यस चढाव अन्तर्गत जन्मेका मानिसहरु लाई यस तरीका देखि देखा बनाउने को चढाव को प्रभाव मा अलि अलि कडाको रूपमा देख्न सकिन्छ। त्यसरी नै, मानिसहरूले तिनीहरूलाई थोरै अहrog्कारी पनि फेला पार्न सक्छन्। जुम्ल्याहा आरोहण पहिलो प्रभाव: यस आरोहको साथ दुर्भावनापूर्ण मानिस बौद्धिकताको हावा हुन्छ जब तपाईं यात्रा गर्नुहुन्छ, अरूले सोच्न सक्छन् कि तपाईं हुनुहुन्छ।
यो बुधको प्रभाव हो जसले आरोहीलाई नियन्त्रण गर्दछ। तपाईं एक पलंग आलु वा एक recruse हुन सक्छ, तर तपाइँको आरोही यस्तो लाग्दैन। आफैमा रहनुहोस्, तपाईं एक सानो शरारतीको रूपमा बुझिन सक्छ।
यो एक मिथुन आरोही हुन का एक लाभ हो। ओह, र तपाईं धेरै हास्यास्पद र व्यंग्यात्मक हुन सक्नुहुन्छ। क्यान्सर आरोही प्रभाव: दयालु तपाईं दयालु र ख्याल राख्ने व्यक्ति जस्तै देखिनुहुन्छ? यो तपाईंको क्यान्सरको बढ्दो स to्केतको कारण हुन सक्छ।
क्यान्सर आरोहणको क्यान्सर चन्द्रमा र सूर्य संकेतसँग समानता हुन्छ। क्यान्सर प्लेसमेन्ट अक्सर एक व्यक्तिको भावनात्मक प्रकृति निर्धारित गर्दछ। तपाईं मकर हुनुहुन्छ जो धेरै व्यावहारिक छ तर तपाईंसँग त्यो आरोही छ भने तपाईंसँग भावनात्मक पक्ष हुन्छ।
व्यक्तिहरूले महसुस गर्न सक्छन् तपाईं मुडी र रहस्यमय हुनुहुन्छ। लियो आरोही प्रभाव: क्यारिज्म्याटिक लायन्स प्रकृति द्वारा क्यारिज्म्याटिक छन् र यस चिन्हमा स्पटलाइटलाई तपाईंको आरोहीको रूपमा मन पराउँछन् तब तपाईं सम्भवतः क्यारिज्म्याटिक व्यक्तिको रूपमा चिनिनुहुनेछ। जब तपाईं कोठामा जानुहुन्छ, आफ्नो टाउको घुमाउनुहोस्, तपाईंको आवाज सुन्नेछ र तपाईंको सल्लाह लिइनेछ, तपाईंले भर्खरै भेटेका व्यक्तिहरू असहमत हुन सक्छन्।
यो सबै राम्रा राम्रो सुनिन्छ, तर त्यहाँ एक नकारात्मक पक्ष छ, लियो आरोही पनि अक्सर धेरै नाटकीय को रूप मा मानिन्छ। कन्या एसेन्डन्ट इम्प्रेशन: पोइज्ड ए कन्या एसेन्डन्टको रूपमा तपाईं धेरै विश्लेषणात्मक र संसाधन हुन सक्नुहुन्छ। समस्या निवारण तपाईको लागि समस्या होइन र तपाईलाई थाहा छ कि कसरी चीजहरू जान्छन् जब चीजहरू कठिन हुन्छन्।
तसर्थ, तपाईं भरपर्दो हुनुहुन्छ र काम पूरा हुने आशा गर्न सकिन्छ। प्रायः यस्ता समयहरू हुन्छन् जब तपाईलाई अत्यधिक मात्रामा आलोचनात्मक र अत्यधिक आलोचनात्मकका रूपमा हेरिन सकिन्छ। यो धारणाले सामान्यतया मानिसहरूलाई तपाईबाट टाढा राख्छ र केही साथीहरूलाई तपाइँको छेउमा छोड्दछ।
मिथुन आरोहणहरूको विपरीत, जसलाई बुधले पनि शासन गर्छ, कन्या आरोहीहरूलाई प्रायः अप्रत्याशित र सनकी मानिन्छ। तुला AscendantImpression: CharmingHave के तपाईंले कहिल्यै मोहक भएकोमा प्रशंसा प्राप्त गर्नुभयो? यदि तपाईंको उत्तर हो हो भने, तपाईंको आरोही सम्भवतः तुला हो। यो शुक्रस-शासित चिन्ह सधैं वृषभ जस्तो राम्रो देखिदैन, तर यसले पक्कै आकर्षण पाउँदछ।
यदि तपाईं यस राशि चक्र आरोहको साथ जन्म भएको छ भने तपाईं जो कोही द्वन्द्व समाधानमा महान हुन सक्नुहुन्छ। तिनीहरू सबै प्रकारका अराजकता र द्वन्द्वबाट जोगिन्छन त्यसैले आफैमा बस्न रुचाउँछन्। केहि समय मा तपाईंलाई अलि धेरै उदार लाग्न सक्छ।
सायद उनीहरूले तपाईंको दृढ इच्छालाई परिदृश्यहरूलाई कमजोरीको रूपमा प्रस्तुत गर्न खोज्छन् र त्यसपछि उनीहरूको फाइदा लिन प्रयास गर्छन्। वृश्चिक AscendantImpression: SexyIf यदि तपाईंले हाम्रो राशि लेखहरू पहिले देख्नुभयो भने, यो तपाईंलाई अचम्म मान्नुपर्दैन कि वृश्चिक नै चिन्ह हो जुन सबैभन्दा सामान्य हो सेक्स, मृत्यु, र पुनर्जन्मसँग सम्बन्धित छ। यदि त्यो राशि चिन्ह तपाईंको आरोही हो, तपाईं सायद तपाईं गणना गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा बढी प्रशंसकहरू।
यस राशि चिन्हको चक्रहरू अक्सर अत्यन्त सूक्ष्म र शान्त रूपमा शक्तिशालीको रूपमा देखिन्छन्। व्यक्तिहरू प्रायः तपाईंलाई कसैले देख्न सक्ने छन् जसले शब्दहरू ह्यान्डल गर्न सक्दछन् र अरूलाई इच्छाशक्तिमा हेरफेर गर्न सक्ने क्षमता राख्छ। एक पटक तिनीहरूले तपाईंलाई राम्ररी चिने पछि, तिनीहरूले महसुस गर्नेछन् कि तपाईं उनीहरूले पहिले सोचे भन्दा राम्रो व्यक्ति हुन सक्नुहुनेछ।
तपाईले नचाहानु भए पनी ध्यान पाउन सजिलो हुन्छ। यदि तपाईंलाई थाहा छैन भने, व्यक्तिहरूले तपाईंलाई अपूरणीय पाउनेछन्। धनु बढ्दो छाप: नि: शुल्क आत्मा तपाई यस्तो व्यक्ति हुन सक्नुहुन्छ जुन केवल पुस्तकहरू पढ्न, भर्खरको घटनाहरूको साथ अद्यावधिक रहन चाहान्छ, र तपाईंसँग समय भएको बखत एकल ट्रिपहरूमा जान सक्छ, तर यो अरूले तपाईंलाई नदेख्न सक्छन्।
धनु चढ्नेको पहिलो घरमा बृहस्पति हुन्छ, र मानिसहरूले तपाईंलाई प्राय: स्वतन्त्र आत्माको रूपमा हेर्दछन्। उनीहरूले सोच्नेछन् कि तपाई धेरै प्रस्ट र मिलनसार हुनुहुन्छ। तपाईं साहसिक गतिविधिहरूमा आकर्षित हुनुहुनेछ, र जब तपाईं आफ्नो खाली समयमा यात्रा गर्न मजा लिनुहुन्छ, अरूले यसलाई तपाईंको व्यक्तित्वको एक हिस्साको रूपमा बुझ्दछन्।
तिनीहरूको दिमागमा, तपाईंको छवि इन्डियाना जोन्स, टिन्टिन, लारा क्रोफ्ट वा क्याटनिस एभर्डेनको हो। मकर राशि आरोहण प्रभाव: निर्धारित मकर राशि संकल्पित, इमानदार र लक्ष्य-उन्मुख व्यक्ति हुन्छन्। आरोही मकर गम्भीर र केन्द्रित देखिन्छ।
जबकि यो राम्रो हुन सक्छ, व्यावसायिक र शैक्षिक, यो तिनीहरूको दैनिक-दिन सामाजिक जीवनमा समस्या हुन सक्छ। जब तिनीहरूले एक मजाक गर्छन्, व्यक्तिहरू बुझ्न सक्दैनन् र तिनीहरू गम्भीर छन् भन्ने लाग्दछन् र कहिलेकाँही यो अलिकति डरावना पनि हुन सक्छ सधैं यस्तो सम्भावना हुन्छ कि तपाईंलाई यस आरोहण स्थानमा गलतफहमी हुनेछ। एक्वेरियस एसेन्डन्ट इम्प्रेशन: एक्लेक्टिक जब तपाईं विद्रोही कुम्भ आरोही हुनुहुन्छ, तपाईं एक सामाजिक गिरगिट मानिन्छ।
व्यक्ति प्रायः तपाईको बुद्धिमत्ता र बुद्धिमत्ता बोल्छन् जब तपाईं उनीहरूको आफ्नै ड्रमको तालमा नाच्दै हुनुहुन्छ भन्ने सोच्न; तपाइँका विचारहरू प्रामाणिक छन् र तपाइँ आफैंलाई विलक्षण तरीकाले प्रस्तुत गर्न चाहानुहुन्छ। तपाईं दयालु र राम्रो हुनुहुन्छ र यी गुणहरूले तपाईंलाई तपाईंको सामाजिक सर्कलमा मद्दत गर्दछ। ओह, र धेरै ज्योतिषीहरूको अनुसार यो निकोल टेस्लाको आरोही थिए।
मनमोहक, तपाईलाई लाग्दैन? मीन AscendantImpression: नेपच्यूनद्वारा ईन्ग्मेटिक नियम, यो चिन्ह अक्सर राशिफलको पुरानो चिन्हको रूपमा चिनिन्छ। यस आरोहीको मूल निवासीहरू पुरानो आत्माको रूपमा देखा पर्न सक्छन्। मीन आरोही अक्सर धेरै भावनात्मक हुन्छन् र कहिलेकाँही अलि दार्शनिक हुन सक्छ।
उनीहरूको दृष्टिकोण वैचारिक र अलि अव्यावहारिक छ। यस कारणले गर्दा यस आरोहण भएका मानिसहरू प्रायः आफ्नै विचारहरूमा हराउँछन्। साथै, उनको व्यक्तित्व सधैं एक रहस्यको एक बिट हो, त्यो तर्क बुझ्न कठिन छ।
त्यसोभए यदि मसँग मेरो आरोहण चिन्हमा मेष राशि छ भने म गतिशील ठानिने छैन। वाह! सायद यसैले नै तपाईले कहिले पनि यसको कभर द्वारा पुस्तक न्याय गर्नु हुँदैन। त्यसो भए तपाईको उदाउँदो चिन्ह के हो? के तपाइँ राशिफल चिन्हहरू फरक फरक लाग्दछ? हामीलाई तलका टिप्पणीहरूमा थाहा दिनुहोस्, हामी तपाईंबाट सुन्न चाहान्छौं।
के मीन प्रतिभाशाली छ?
के विशेषताहरु एकमीन व्यक्तित्वछ? सबै संकेतहरू जस्तै, उनीहरूकोव्यक्तित्वजटिल छ।माछाअविश्वसनीय रचनात्मक, समानुभूतिशील, र उदारको रूपमा परिचित छन्, तर तिनीहरू अत्यधिक भावनात्मक, प्रभावशाली, र बन्द बन्दबाट पनि पीडित हुन सक्छन्।3 २०२०।
बुद्धिको अर्थ सबैको लागि फरक हुन्छ। तर व्यापक अर्थमा हामी कसैलाई बौद्ध भन्न सक्दछौं जुन दुबै तार्किक समस्या समाधान गर्ने हो र स्वाभाविक रूपमा उसको भावनात्मक वातावरणसँग मिल्दोजुल्दो छ। तपाईं कसैको तार्किक रणनीति र सामाजिक सहानुभूति प्रत्येक दिन आउँदैन।
नमस्कार दर्शकहरु र बिस्टमा पुन: स्वागत छ! राशि चिन्हले तपाईंको बारेमा धेरै प्रकट गर्न सक्छ, जस्तै व्यक्तित्व र चरित्र। तर त्यहाँ भविष्यवाणी गर्न सक्ने एक अर्को अचम्मको कुरा छ। तपाईंको बुद्धिमत्ता! र आजको लेखमा हामी तपाईंलाई भन्छौं कि तपाईं आफ्नो राशि चिन्हको अनुसार कति स्मार्ट हुनुहुन्छ।
के कुम्भ होशियार छ? कन्याको बारेमा के छ? क्यान्सर कति बुद्धिमान् छ? के मीन कम्तीमा बुद्धिमान् छ? अधिक मिथुन राशिको अन्त्यसम्म हेर्नुहोस्: मिथुन राशिको स्मार्ट चलाउन मिल्छ। सानै उमेरदेखि, तिनीहरू अरूलाई बुद्धिमत्ता र चतुरताको साथ प्रभावित गर्छन्। तिनीहरू विभिन्न क्षेत्रमा विशेषज्ञ हुन सक्छन् किनकि उनीहरू अत्यन्तै जिज्ञासु छन्।
उनीहरूसँग धेरै प्रतिभाहरू छन् किनकि साइन व्यक्तिगत विकासमा दोहोरो छ कि उनीहरूले छनौट गर्छन् सबै सूक्ष्मताहरू कब्जा गर्नेछन् र असाधारण परिणामहरू प्राप्त गर्नेछन्। तपाईं उद्यमी र संसाधन हुनुहुन्छ। उनको उज्ज्वल बौद्धिकता उनको उपहार हो जसले फोकसको अभावलाई पूरा गर्दछ जुन उनको अविश्वसनीय मानसिक फ्याकल्टीको फ्लिप पक्ष हो।
मिथुन होशियार राशि चक्र हो र यस तथ्यले पुष्टि गर्न सकिन्छ कि यो चिन्हले अन्य चिन्हहरूको तुलनामा सबैभन्दा नोबेल पुरस्कार विजेताहरू समावेश गर्दछ। के तपाईं जोडाहरू भेट्टाउनुभयो जो सुपर बुद्धिमान छन्? वा यसको विपरित, ती स्मार्ट छैन जो? हामी तलका टिप्पणीहरूमा जान्न चाहन्छौं। धनु: प्रफुल्लितकारी, व्यंग्यात्मक, द्रुत गतिमा धनु राशि चक्र ब्रह्माण्डको एउटा चतुर संकेत हो।
यो परिवर्तनीय फायर साइनसँग दैनिक जीवनबाट संसारका अनुभवहरूको ज्ञानको लागि एक लालसा तिर्खा छ। स्वतन्त्रता र स्वतन्त्रताको लागि चुस्नेवाला, तपाईंले प्राय: धनु पहाडमा माचमा हिंडिसकेपछि घामको किनारमा यात्राको लागि तयारी गर्दै पाउनुहुनेछ। यो उनीहरूको अनौंठो बुद्धि र जीवनको स्वाद लिने तरीका हो।
तपाईं अनिश्चित भविष्यको लागि योजना गर्दै हुनुहुन्न। कन्या: कन्या, बुधले शासन गरेको, अन्वेषण गर्न जन्म भएको थियो। तिनीहरू तथ्या and्क र आंकडाको सूचि बनाउन विस्तृत स्प्रेडशीटहरू राख्न, बान्की पत्ता लगाउन र विश्लेषणहरू गर्न मन पराउँछन्।
के कन्या कन्यालाई यति बुद्धिमान बनाउँदछ उसको अंश उनको संगठनात्मक कौशल हो; यो तपाईको टाउकोमा विशाल डाटाबेस भएको जस्तो छ जहाँ तपाईले कहिले पनि सँधै राम्ररी वर्गीकृत र ट्याग गर्नुभयो। तिनीहरू सजिलैसँग समीकरणमा र बाहिर कसरी आफ्नो तरिका पत्ता लगाउँदछन्। यो तिनीहरूको तार्किक-गणितीय बौद्धिकताका कारण हो, तर्क र विद्वान् सबैकुरामा, वास्तवमा चीजहरूको महान योजना बुझ्नको लागि।
कुम्भ: खुला दिमागको कुम्भले वास्तविक रूपमा नयाँ मानदण्ड, चुनौती, र जीवनमा चल्तीहरू स्वीकार गर्दछ। यो राशि चिन्ह विद्रोही युरेनस द्वारा शासित छ, तपाईं एक्वेरियस एक्लो हुने आशा गर्न सक्नुहुनेछ - मैन्युअली चुनौतीपूर्ण अवस्थित सामाजिक नियमहरू। यस सूर्य चिन्हमा प्राय रुचिहरू हुन्छन् र नयाँ विचारहरू र अवधारणाहरू सिक्न मनपर्दछ।
तपाईं उनीहरूबाट भीडबाट बाहिर निस्केर क्रान्तिको बाटोमा अघि बढ्ने आशा गर्न सक्नुहुन्छ; तिनीहरूको विचार तिनीहरूको वरिपरिको मान्छेले बुझ्न सजिलो हुँदैन। तर केवल किनभने तिनीहरू आफ्नो समय भन्दा अगाडि थिए। सोबर तर्कसंगतता र सरल सोचको मिश्रणले यस सूर्यलाई तल प्रतिभा दिन्छ।
तुला: तुला राशिले सबैलाई खुशी पार्छ र सुरूवात तर्कलाई घृणा गर्दछ। तिनीहरूले बाहिरी सुन्दरताको कदर गर्दछन् र उनीहरूको आफ्नै उपस्थितिको ख्याल राख्छन्। यस कारणले गर्दा, तिनीहरू सुरुमा अलिक सतही देखिन्छन्।
तपाई निश्चित रूपमा एक हाइपर-इंटेलिजन्ट बुकवर्मको रूपमा आउँनुहुन्न; धोका नदिनुहोस् - यस चरित्रसँग धेरै बौद्धिकता छ। यो मिस गर्न सजिलो छ किनकि यो विरलै कसैको अनुहारमा उनीहरूको बुद्धिमत्ता रब्बर गर्दछ। अहंकारी वा तर्कसंगत, तिनीहरू लगभग कुनै पनि शैक्षिक कुराकानी मा आफ्नो पकड गर्न सक्छन्।
मकर: यो चिन्ह लक्ष्य उन्मुख, व्यावहारिक, र कुशल छ। मकर राशि को विशेषज्ञता धेरै विषयहरु कभर हुन सक्दैन, तर जब यो आफ्नो विशेषज्ञता को क्षेत्रहरु को लागी आउँछ, अरु कोही राम्रो पढिएको छैन। तपाई आफैंलाई कुनै पनि डिग्रीमा डुबाउन चाहानुहुन्छ जुन तपाईको आफ्नै सफलतामा योगदान पुर्‍याउँछ।
र तिनीहरू केवल एक विषय o अभ्यास सिकेर सन्तुष्ट छैनन्। स्टेनबक उत्तम प्रयोगशाला पार्टनर हो। उनीहरूले आफ्नो गृहकार्य गरेका छन् र वास्तविक संसारमा उत्तम परिणामहरू प्राप्त गर्न सिद्धान्तहरू कसरी लागू गर्ने भनेर ठीकसँग जान्दछन्।
वृश्चिक: यो कुनै दिमाग नभएको जस्तो देखिन्छ कि पानी तत्व अन्तर्गत जन्मेका मानिसहरुमा भावनात्मक संवेदनशील हुन्छन्, तर वृश्चिक पनि, अन्य कुराहरुको साथ, केक ले। यो चिन्हमा सहानुभूति को माध्यम बाट उनीहरूको अरुको व्यक्तिगत धारणा पहिचान गर्न अत्यन्त क्षमता छ। वृश्चिक व्यक्तिले अरूको भावनात्मक अवस्थासँग जडान गर्न सक्दछन् र उनीहरूलाई कस्तो महसुस हुन्छ भनेर राम्रोसँग बुझ्न सक्दछन्, अन्य, अधिक तार्किक, विचारकहरूले गर्न नसक्ने चीजहरू स्वीकार्ने क्षमता।
तपाईंसँग अद्भुत तर्क कौशल छ। यसले तिनीहरूलाई अधिकांश व्यक्तिहरूको गहिरा चिन्ताहरूमा डुब्न सक्षम गर्दछ। यी सबै एकै जनामा ​​एकजुट भएकोले वृश्चिकलाई सबैभन्दा चम्किला राशिको रूपमा चिनिन्छ।
लियो: लियो सडकमा एक बुद्धिमान राशि चिन्ह हो। तिनीहरू धेरै आफ्नो अन्तर्ज्ञान र महान धूर्तताबाट निर्देशित छन्। यसले प्राय जसो उनीहरूले जे पनि गर्न सफल हुन्छन्।
हे जन्मेको योद्धाहरू हो। जहाँसम्म, कहिलेकाँही उनीहरू अभिनय गर्नु भन्दा पहिले आफ्नो टाउको को उपयोग गर्नुको सट्टा 'पेट भावना' को साथ टाढा बन्छन्। तिनीहरू शानदार श्रोता हुन् र बुझ्दछन् कि सबैजना अरुबाट सिक्न सक्छन्।
यो संकेत हो कि मेषलाई के चाहिन्छ जान्छ: मेष दुवै स्मार्ट र मूर्ख दुवै समयमा हुन सक्छन्। व्यक्ति जो यस राशि चिन्ह अन्तर्गत पर्दछ सामान्यतया निर्दोष हुन्छन् र हामी तिनीहरूलाई प्यारा पनि भन्न सक्छौं। यी व्यक्तिहरूले चीजहरूलाई गम्भीरताका साथ लिदैनन् र अधिक आत्म-केन्द्रित हुन्छन्, अन्य व्यक्तिको भावनाहरूमा अलि संवेदनशील हुन्छन् र आफैलाई मात्र सोच्दछन्।
तपाईं पर्याप्त चलाख तर भोला हुनुहुन्छ। कहिलेकाँही उनीहरूलाई हेरफेर गर्न सकिन्छ। आगो तत्त्वका प्रतिनिधिहरू अत्यन्तै आवेगवान र द्रुत स्वभावका हुन्छन्।
मेषको सटीक र गहन विचारहरू हुन सक्छन्। तपाईले त्यस्ता परिस्थितिबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ जहाँ अर्का व्यक्तिले धेरै अघि नै त्यागेका थिए। जब तपाइँले हतार गर्नुभयो केही निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ केहि वास्तवमा उत्कृष्ट बौद्धिक छन् यस ईग्न मा।
सबैजनाको अन्धकार पक्ष हुन्छ। र तपाईं यो बताउन सक्नुहुन्छ कि यो तपाईंको जन्म महिना द्वारा के हो। हामी के कुरा गर्दैछौं जान्नको लागि, आफैलाई हेर्नुहोस् 'हरेक राशि चिन्हको अन्धकार पक्ष' शीर्षक लेख।
अब तपाइँको राशि साइन इनमा तपाइँको खुफियामा फर्कनुहोस्। क्यान्सर: क्यान्सरहरू धेरै संवेदनशील हुन्छन् र उनीहरूको परिवारमा केन्द्रित छन्। यद्यपि उनीहरूको दिमाग कुनै पनि लचिलो हुँदैन।
तिनीहरू महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न ढिलो हुन्छन् र सामान्यतया फिर्ता लिन्छन्। तिनीहरू प्राय: विगतमा बाँचिरहेका छन् र मानिसहरूलाई हेरफेर गर्नमा राम्रा छन्। यो किनभने तिनीहरू स्वाभाविक चालाक र सहज ज्ञान युक्त मान्छे मनोविज्ञान हो।
तिनीहरू उच्च लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सक्षम हुन्छन् र नेता बन्न सक्छन् किनकि तिनीहरूको आत्मा तिनीहरूको खाकामुनि लुकेको छ। तिनीहरू कहिलेकाँही उनीहरूको अतिसंवेदनशील प्रकृतिको कारणले खराब मान्न सकिन्छ, सबैभन्दा ठूलो लेख्ने बच्चा हो र कहिलेकाँही बुद्धिको अभाव हुन्छ। थप रूपमा, तिनीहरू अधिक भावनात्मक हुन सक्छन् र वास्तविक प्रमाण वा प्रमाण बिना नै चीजहरू कल्पना गर्न सक्दछन्।
वृषभ: वृषभ तिनीहरूका भारी तर स्थिर र व्यावहारिक दिमागका लागि परिचित छन्। जब भौतिक क्षेत्रको कुरा आउँदछ खुफिया नै प्रकट हुन्छ। त्यसोभए तिनीहरू आफ्नो सांसारिक बुद्धिलाई खोल्छन, ध्यानपूर्वक सोच्छन् र सबै कुरा तौल गर्छन्।
निस्सन्देह, वृषभ बीचका विद्वानहरू छन्, तर तिनीहरू क्यारियर उच्चको विशेष क्षेत्रमा आफ्नो ज्ञानको घमण्ड गर्दैनन्, अक्सर उनीहरूको बुद्धिले गर्दा हुँदैन, तर प्रभावशाली साथीहरूको लगनशीलता र समर्थनको कारण। उनीहरू व्यक्तिगत रूपमा अस्वीकार लिन्छन्, यदि यो व्यक्तिगत त पटक्कै छैन भने पनि। व्यक्ति जो यस राशि चिन्ह अन्तर्गत पर्दछन् स्व-केन्द्रित र मूर्ख हुन्छन्।
मीन: मीन जातिले यस तथ्यबाट पीडित हुन सक्छ कि बुध तिनीहरूको राशि चिन्हका लागि हानिकारक छ। हो, तिनीहरू भ्रमको संसारमा बस्छन्, तिनीहरू मोलेहिललाई पहाडमा परिणत गर्न सक्दछन्, तिनीहरूको कल्पना ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसोभए तिनीहरूलाई कम से कम बुद्धिमान राशि चिन्ह मान्न सकिन्छ किनकि उनीहरू अत्यन्त मूर्ख छन्।
अल्छी माछा प्रवाहको साथ जान्छन, त्यसैले अरूहरू अक्सर उनीहरूको ज्ञान महसुस गर्न असफल हुन्छन्। तिनीहरू अझै पनि करियर उचाइमा पुग्न सक्छन् रचनात्मक राशि साइन इनमा तिनीहरूको सरलताका लागि धन्यवाद! यो अनौंठो मिक्समा असाधारण खुशी थप्न नबिर्सनुहोस् जुन उनीहरूको कम बुद्धिमत्तालाई अफसेट गर्दछ। तिनीहरू बढि भावनात्मक हुन्छन् र जान्दछन् कि तिनीहरू मान्छेहरूलाई न्याय गर्न अति नै चाँडो छैन।
गल्तीहरूबाट सिक्ने र आफैंलाई राम्रो प्रमाणित गर्ने कुराले तपाईंलाई विशेष बनाउँदछ। जबकि तपाईंको राशि चिन्हले तपाईंको बुद्धिमत्ताको बारेमा धेरै कुरा प्रकट गर्न सक्दछ, त्यहाँ अन्य धेरै चीजहरू छन् जुन यसले प्रकट गर्न सक्दछ। तपाईका चीजहरू के हुन् भनेर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ जुन तपाईंको राशि चिन्हको आधारमा तपाईंको सबैभन्दा आकर्षक सुविधाहरूको बारेमा सिकेर वा राशि चिन्हहरूको खराब बानी पत्ता लगाउँदै, यी २ लेखहरूले तपाईंलाई आफू र अरूलाई अझ राम्ररी बुझ्न मद्दत गर्दछ।
के तपाईंलाई राशि संकेतहरूले तपाईंको व्यक्तित्वलाई असर गर्छ जस्तो लाग्छ? हामीलाई तलका टिप्पणीहरूमा थाहा दिनुहोस्!
यससँग सब भन्दा मिल्दो संकेतहरूमाछासामान्यतया वृष, कर्क, वृश्चिक र मकर मानिन्छ। यसका साथ कम से कम मिल्दो संकेतहरूमाछासामान्यत: मिथुन र धनु मानिन्छ। सूर्य संकेतहरू तुलना गर्दा अनुकूलताको राम्रो सामान्य विचार दिन सक्छ।
मार्च १ 13 किन विशेष छ?
१ 194 33 जर्मन सेनाले क्र्याकमा यहूदी बस्तीलाई तरल पदार्थ बनायो
हजारौं पुरुष, महिला र केटाकेटीहरू नाजीहरूले हत्या गरे वा विनाश शिविरमा निर्वासित गरियो। डरलाग्दो घटना फिल्म सिन्डलरको सूचीमा चित्रित गरिएको छ।
मीनसँग कस्तो शक्ति छ?
जबकि मीन जहिले पनि तीव्र भावनाहरूसँग स struggle्घर्ष गर्दछ, तिनीहरूसँग छमार्फत धक्का र फेरि माथि उठ्ने क्षमता। तिनीहरूको शक्ति तिनीहरू गिर्दा पछाडि आफैलाई फिर्ता लिनको लागि बाटो खोज्ने क्षमतामा निहित छ। ठीक सागरका छालहरू जस्तै क्रुश डाउन डाउन आउने जहिले पनि फेरि फेरि माथि आउँछ।
मार्च १ for को राशिफल के हो?
मार्च १ Z राशि चिन्ह - मीन मार्च १th मा मीनको रूपमा जन्मँदा तपाईंको तीव्रता, प्रयोग र आध्यात्मिकताले तपाईंलाई परिभाषित गर्छ। तपाईं आफ्नो जीवनमा ठूलो जोश ल्याउनुहुन्छ र कुनै कुराको लागि समय र उर्जा खर्च गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ जुन तपाईंलाई सार्थक लाग्छ। तपाईंसँग रूचिहरूको बढ्दो संख्या छ, तपाईं कम्तिमा पनि एकचोटि प्रयास गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ।
मार्च १ 13 मा जन्मेका केहि प्रसिद्ध व्यक्तिहरू को हुन्?
प्रसिद्ध व्यक्तिहरू मार्च १ 13 मा मीन राशि चक्र अन्तर्गत जन्म: जोसेफ प्रिस्ले, विलियम एच। मैसी, डाना डेलानी]
मार्च १ birthday को जन्मदिनको साथ तपाईलाई मीनले केले बनाउँछ?
यो यही कुरा हो जुन तपाईंलाई मीन १ as राशिको जन्मदिनको साथ पहिचान गर्दछ। एक जवान व्यक्ति, मीन, तपाईं विशेष थिए। तपाईंसँग तपाईंको बचपनका वर्षहरूका जटिल र खुशीयाली सम्झनाहरू छन्। तपाइँका आमाबुवाले तपाइँलाई एक विश्वासमा एक विश्वासको रूपमा हुर्काउनुभएको छ, तर वयस्क मीनको रूपमा, तपाइँ यसलाई अभ्यास गर्न सक्नुहुन्न। तपाईंसँग आफ्नो बिचार बदल्ने अधिकार छ।